အိပ်မက်ဆိပ်ကမ်း: တောင်ညိုမှာ ပြိုမယ့် မိုး
တောင်ညိုမှာ ပြိုမယ့် မိုး
ရေးထားခဲ့တာ ရက်တွေ တော်တော်ကြာခဲ့ပြီ...။
လွန်ခဲ့တဲ့ ဆောင်းယွန်းယွန်းတစ်ချိန်က အိမ်ပြန်တော့ အိမ်ကိုရောက်နေရဲ့နဲ့ အိမ်မှာနေရင်း အိမ်ကို ပြန်လွမ်းမိတယ်....။ ကျွန်တော်တို့က တစ်ခါတစ်ခါ သတိရခြင်းတွေ တနင့်တပိုးကို တန်ဖိုးကြီးကြီး ပေးဝယ်ဖို့ ဝေးဝေးများ ပြေးနေကြရော့လား မသိဖူး။ အချိန်တွေက တစ်ဆောင်းတောင် ပြန်ဝင်ရော့မယ်..။ မိုးတွေ မရွာခဲ့ဖူး ထင်ပါရဲ့လေ...။
Happy Birthday Mum & Nyimalay. I just noted the time where we were there.
Be healthy and be live long life together with happiness!
အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် နောက်ကျခဲ့တဲ့ MEF သုံးနှစ်ပြည့် ဂျာနယ်လေးကို ဒီမှာ ဖတ်နိုင်ပါတယ်နော်...။
၀ါးး ကောင်းလိုက်တာ ခံစားရတယ် ..း(
နယ်ကျော်နေတဲ့မုဆိုးတွေ မကျော်ချင်ပဲကျော်နေရတဲ့မုဆိုးတွေ သူတို့တောတောင်ကို လွမ်းနေမှာတော့ အမှန်ပဲ ..
တန်ဖိုးကြီးအလွမ်းတွေကို ခါးပိုက်ထဲ ပိုက်ရင်းးးးးးးးးးးးးးးးးး
ကဗျာလေးဖတ်ပြီး တစ်ခုခုကို တွေးမိသလိုလိုခံစားရတယ်။။
ဟုတ်တယ် အိမ်ပြန်ရောက်နေတာတောင် ငယ်ငယ်တုန်းက အချိန်လေးတွေကို ပြန်ပြန်သတိရမိတတ်တယ်
ခုလက်ရှိအချိန်နဲ့ မတူတော့တဲ့ ငယ်တုန်းက အချိန်တွေပေါ့.
ဘာနဲ့မှ ပြန်ဝယ်လို့မရတော့တဲ့ အချိန်တွေလည်းဖြစ်တယ်လေ